Ukusebenzisa iibhotile zeplastiki kunokukhulula iikhemikhali ezibangelwa ngumhlaza
Zininzi iintlobo zeebhotile zeplastiki zikhuselekile ukuphinda zisebenzise ubuncinci amaxesha ambalwa ukuba zihlanjwe kakuhle ngamanzi ashushu. Kodwa iimpawu zentsholongwane malunga neekhemikhali kwiLexan (iiplastiki ze-7 ze-plastiki) zanele ukwankqisa ngisho neengcali zezemvelo ezizimeleyo ukuzisusa (okanye ukuzithenga kwindawo yokuqala).
Iikhemikhali ezinokuthi zihlambulule ukutya kunye neziNxila kwii-Plastic Bottles
Ucwaningo luye lwabonisa ukuba ukutya kunye neziphuzo ezigcinwe kulezi ziqukathi-kubandakanywa neebhotile zamanzi ezicacileyo ezixhomekeke kuzo zonke i-backpack-zingaba neengqinisiso zeBisphenol A (BPA), i-chemical-synthetic chemical system that can interfere with the system's body messaging system .
Ukusetyenziswa kwezixhobo zePlastiki ezinokusetyenziswa kwiComputer Chemicals
Izifundo ezifanayo zifumene ukuba ukusetyenziswa kwakhona kwakhona kweebhotile-eziza kutyunjwa ngokugqithisa ngokuqhelekileyo xa zihlamba-zandisa ithuba lokuba iikhemikhali ziza kuphuma kwiintlupheko ezincinci kunye nezixhobo eziphuhliswa ngokuhamba kwesikhathi. Ngokwe-Environmental Environment Research & Policy Centre, ehlolisise izifundo ezili-130 kwisihloko, i-BPA idibaniswe nomhlaza wesisu kunye nomhlaza, ukwanda komngcipheko wokuphuphuma kwesisu, kunye nokunciphisa amanqanaba e-testosterone.
I-BPA ingakwazi ukuphazamisa iinkqubo zokuphuhlisa abantwana. (Abazali baqaphele: Ezinye iibhotile zentsana kunye neenkomfa ezingenayo zenziwe ngeeplastiki eziqulethe i-BPA.) Iingcali ezininzi ziyavuma ukuba inani le-BPA elingaba nokutya kunye nokusela ngokusingatha ngokuqhelekileyo mhlawumbi luncinci, kodwa kukho ukukhathazeka malunga nomphumo wokunyuka amanani amancinci.
Ngaphandle kwamanzi ePlastiki kunye nee-Soda Bottles kufuneka singasetyenziswanga
Abagqugquzeli bezeMpilo bancomela ukuba bangasebenzisi kwakhona iibhotile ezenziwe kwiplastiki # 1 (i-polyethylene terephthalate, eyaziwa nangokuthi i-PET okanye i-PETE), kubandakanywa amanzi amaninzi ahlaselweyo, i-soda, neebhotile.
Ngokutsho kweGreen Guide , iibhotile ezinjalo zikhuselekile ukusetyenziswa kwexesha elilodwa, kodwa ukuphinda kusetyenziswe kwakhona kufuneka kugwenywe ngenxa yokuba iingcaphelo zibonisa ukuba zinokwenza i-DEHP-enye inokwenzeka ukuba i-carcinogen yabantu-xa iimeko ezingaphantsi.
Izigidi zeePlastiki zeePlastiki ziphela kwii-Landfills
Iindaba ezilungileyo kukuba iibhotile ezinjalo zilula ukuzibuyisela; malunga nayo yonke inkqubo yoomasipala yokubuyisela kwakhona iya kubabuyisela.
Kodwa ukusetyenziswa kwazo akunjalo nakwiindawo ezinoxanduva lokusingqongileyo: I-Non-profit ye-Berkeley Ecology Centre yafumanisa ukuba ukuveliswa kweplastiki # 1 isebenzisa ubuninzi bemandla kunye nezixhobo kwaye kuvelisa ukukhutshwa kwamachiza kunye nokungcola okubangela ukufudumala kwehlabathi . Kwaye nangona iibhotile ze-PET zingaphinda zenziwe kwakhona, izigidi zifumana indlela yazo ekuhlaleni iifayile rhoqo kwi-US kuphela.
Izikhumba zePlastiki ezingcolisayo zikhupha iiKhemikhali ezinobuthi
Omnye ukhetho olubi kwiibhotile zamanzi, ezinokuphinda zenziwe kwakhona okanye ngenye indlela, yiplastiki # 3 (i-polyvinyl chloride / PVC), enokubangela ukuba i-hormone iphazamise iikhemikhali kwiimveliso zamanzi ezigcinayo kwaye ziza kukhupha i-carcinogens zokwenziwa kwimeko xa ichithwa. Iplastiki # 6 (i-polystyrene / PS), iboniswe ukuba ifake i-styrene, i-carcinogen yomntu, mhlawumbi kunye nokutya.
Izikhumba ezikhuselekileyo ezikhuselekileyo zikhona
Ukukhethwa okukhuselekileyo kubandakanya iibhotile ezifakwe kwi-HDPE ephephile (iplastiki # 2), i-polyethylene ephantsi (i-LDPE, i-AKA plastic # 4) okanye i-polypropylene (PP, okanye iplastiki # 5). Iibhotile ze-aluminium, ezifana nezo zenziwe yi-SIGG kwaye zithengiswa kwiindawo ezininzi zokutya zemvelo kunye neemveliso zeemveliso zendalo, kunye neebhotile zamanzi ezingenasici nokhuseleko olukhuselekileyo kwaye lunokuphinda lisetyenziswe ngokuphindaphindiweyo kwaye ekugqibeleni lusetshenziswe kwakhona.
Ukulungiswa kokuzivocavoca: Ukuphambana okungafezekiyo
Ngaba Sinokuyeka Ukutshabalalisa Ukusuka Ekubhujisweni Kwetwandle Lwethu?